यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका मन्त्री स्थापितलाई हटाउने तयारी | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका मन्त्री स्थापितलाई हटाउने तयारी
प्रकाशित मिति १५ कार्तिक २०७५, बिहीबार १४:५२ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री केशव स्थापितलाई सरकारबाट हटाउने तयारी भएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलमाथि अभद्र व्यवहार गरेकाले मन्त्री स्थापितलाई सरकारबाट हटाउने तयारी भएको स्रोतले बतायो ।
दुई जना महिला पत्रकारले मन्त्री स्थापितमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाइरहेका बेला सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थापितलाई मन्त्रीबाट हटाउने तयारी गरेका हुन् । पौडेलले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्ने स्रोतले बतायो ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्री स्थापितले बजेटको विषयमा टेबुल ठोकाठोक गरेको स्रोतले बतायो ।
स्रोतले भन्यो, ‘केशवजी अभ्रद तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो। उत्तेजनामा आउनुभयो। अशिष्ट, अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्नुभयो । मन्त्रीहरू सबै पार्टीले चयन गरेको हो । पार्टीको सरकार भएकाले मुख्यमन्त्रीले नेतृत्वसँग छलफल गरेर निर्णय लिनुहुन्छ ।’
काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई खुवाउने खानाको टेन्डरमा ब्यापक अनिमियता भएको रहस्य खुलेको…
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले करिब १३ हजार पदका लागि खुलाएको खुल्ला प्रतिपस्र्धाको परिक्षाका लागि दुई लाख परिक्षार्थीको आवेदन…
चितवन । निरन्तर वर्षापछि पहिरो खस्दा नारायणगढ मुग्लिन सडक र पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय…
माइत जाने चेलीलाई ५ सय ८० शब्दको सुझाव ! फेसबुक चलाउने सबैले पढ्नै पर्ने
माइत भन्ने बित्तिकै हरेक महिलाको अनुहारमा रौनक आउँछ । माइतको मोह महिलाले जीवनभर भुल्दैनन् । पतिले घरमा जतिसुकै सुख…
अस्पतालको लापरबाहीले मृत्यु भएपछि नोबेल अस्पतालमा नाराबाजी, पिडितले मुख्यमन्त्री गुहारे
मोरङ । नोबेल शिक्षण अस्पताल झापाको विर्तामोड–१० की सबिता राईको उपचारको क्रममा चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु भएको भन्र्दै मृतकका आफन्तहरुले…
३५ सय वर्षअघि पनि गरिन्थ्यो गर्भ परीक्षण !
मिश्र । महिलाको गर्भ परीक्षणका लागि अहिले बजारमा अनेक खालका उपकरण छन् । तर, आजभन्दा ३५ सय वर्षअघिको समयको…